Josh Galvez sy ireo horonantsary hosodoko nomerika tsy mampino | Famoronana an-tserasera
Josh Galvez sy ireo horonantsary hosodoko nomerika tsy mampino azy
Josh Galvez dia talen'ny zavakanto ary mpanazava ny fiaviany Filipiana. Na dia tsy mamela azy hanokan-tena tanteraka amin'ny fampandrosoana asa manokana aza ny asany dia isaky ny manana fotoana izy dia mamorona tetikasa vaovao ary maro amin'izy ireo no zarain'ny tambajotra amin'ny endrika haingam-pandeha. Androany aho nahita ny iray tamin'ireo horonantsariny ary gaga be aho. Ny fampiasany ny loko dia mahay ary ny teknika azony dia envy, vokatry ny asa an-taonany maro.
Ao amin'ny lahatsariny no ahitantsika ny fomba nahavelomany ireo fanoharana nataony teo imasontsika niaraka tamin'ny nuansa sy pitsopitsony maro be. Ny horonantsarin'izy ireo tsirairay avy dia toy ny fahitana an-tsary izay amporisihiko anao ho hitanao satria ankoatry ny maha-aingam-panahy azy ireo, dia mety ho azo sary an-tsaina sy idealy ho anao izy ireo hahazo hevitra vitsivitsy rehefa miasa amin'ny sary sy sary hosodoko nomerika. Na dia miasa amin'ny karazana fanohanana sy amin'ny karazana fitaovana rehetra aza izy, nanomboka ny taona 2010 dia raiki-pitia izy sary hosodoko nomerika na dia tsy izany aza no antony nilaozany ny fampiasana ireo fitaovana nentim-paharazana. Ireto misy ohatra sasany amin'ny asan'izy ireo amin'ny endrika horonan-tsary sy ny mombamomba azy ireo hahafahanao manaraka akaiky ny sanganasa mahafinaritra ataon'izy ireo, satria mamporisika ny mpanakanto voalohany sy ny mpanao sary voalohany hanohy hiasa mafy sy hanararaotra ireo fitaovana natolotry ny haitao vaovao.
Mombamomba ny tambajotra Behance
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Josh Galvez sy ireo horonantsary hosodoko nomerika tsy mampino azy
Ahoana ny fomba hanovana ny endrika Photoshop ho kaody CSS ao anatin'ny iray minitra
Ny sary maneso an'i John Holcroft